Kioba: Maneho Hevitra Momba Ny Famotsorana an’i Ferrer García Ireo Any Am-pielezana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2012 15:01 GMT
Ny Zoma, sahala amin'ny hoe tsy hisy fivoarany mihitsy ilay toe-draharaha. Ny “Andian'ireo voafonja 75″ teo aloha dia efa nifonja nandritra ny iray volana teo ary nizotra tamin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina mba hanoherany ny fanagadrana azy. Ireo fanamarihana avy amin'ny Cuban Exile Quarter dia nanoratra lahatsoratra iray mikasika “ny fianakaviana be herim-po niavian'i Ferrer García”, izay manome ny sasantsasany manan-danja amin'izay tranga niainany :
Naniry ny hamono an'i José Daniel Ferrer García ny fitondran'i Castro tamin'ny 2003, nangataka ny hanamelohana azy ho faty tanatinà fotoam-pitsarana manetriketrika saingy ireo antsoantso iraisam-pirenena no nahatonga azy ireo hihemotra sy hanasazy azy 25 taona an-tranomaizina ho takalon'izay. Taorian'ny fahafatesana aloha loatra sy nampalahelo nanjo ilay mpanorina ny Vehivavy Kiobana mitafy Fotsy, Laura Inés Pollán Toledo tamin'ny 14 Oktobra 2011, tsy azo tsinontsinoavina ny fiahiahiana ny amin'ny ain'i José Daniel. Toa an'i Laura Pollán, José Daniel dia manana tetikady sy fomba fijery tsy mampiasa hersetra ary fahafahana manetska sy mandrindra ny olona ampifangaroina aminà fahasahiana goavana.
Hatramin'ny fihazonana farany an'i José Daniel Ferrer García tamin'ny 2 Aprily 2012, ny rahalahiny, Luis Enrique, dia nikarakara fanentanana iray ho amin'ny fanafahana azy sady nibitsika, na izany ho an'ny kaontiny manokana, na ho an'ny kaonty twitter-n'ny rahalahiny mba hanairana ny fahatsiarovan-tena sy ny firaisankina.
Miangavy, araho tsara ny momba ny fitarainan'i José Daniel Ferrer García ary mitenena ho azy satria mety hiankina amin'izany tanteraka ny ainy. Taorian'ny 24 andro nigadrany, farany dia nampahafantatra ihany ny manampahefana Kiobana omaly fa mihevitra ny hiampanga an'i José Daniel ho ‘manakorontana fiainam-bahoaka’ ry zareo.
Tsy ela akory, nivoaka ny vaovao fa he nanapa-kevitra i Ferrer García ny hampiato ny fitokonany tsy hihinan-kanina ary nitombo ny hetsika ikendrena ny fanafahana azy: Pedazos de la Isla dia nampakatra tatitra amin'ny antsipirihany momba “ny sasany tamin'ireo Kiobana maro izay tavela any am-ponja ambadiky ny tsatoka vy noho ny fiarvany ny zon'olombelona sy ny fahalalahana ao Kioba”, ampiany hoe :
Ndeha angatahantsika ny hanafahana azy ireo tsy misy hatak'andro!
Toa nivoaka tsy ela akory taoran'izay ny famotsorana an'i Ferrer García : Omaly i Uncommon Sense dia nitatitra fa :
Ilay mpitarika ny mpanohitra Kiobana Jose Daniel Ferrer Garcia dia nafahana ny fonja tamin'ny Alahady, efa ho volana iray taorian'ny nisamborana azy akaiky indrindra.
Saingy, ilay bilaogera, tsy te-hiseho ho feno fanantenana loatra, nanampy hoe :
Ferrer, iray amin'ireo mpitarika mpanohitra isan'ny mavitrika indrindra dia mbola miatrika fiampangana ho ‘mikotrika, mitarika ary mamatsy fanakorontaana fiainam-bahoaka’ any atsinanan'i Kioba. Tsy mbola misy datim-pitsaràna noraiketina hatreto.
Ny hajiantsary nampiasaina ato anatin'ity lahatsoratra ity, “fonja”, dia avy amin'i the_kid_cl, nampiasàna ny Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Creative Commons license. Tsidiho ny tahirin-tsarin'i the_kid_cl ao amin'ny flickr.